Serivisy fanodinana CNC - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Mpanamboatra servisy fitotoam-bidy miendrika cnc-OEM / ODM China CNC fikosoham-bary / mpamokatra ampahany
Mila azo itokisana ve ianao Fikosoham-barympiara-miasa amin'ny kalitao tsy manam-paharoa? Ouzhan Trade (Shanghai) Co., Ltd. dia orinasa China CNC matihanina sy za-draharaha izay manome ny marinaSerivisy fanodinana CNC misy milina mandroso ao anatin'izany Fikosoham-baryivon-toerana manomboka amin'ny axe 3 ka hatramin'ny axis 5. Ary ny injenieranay mahatanteraka dia miavaka amin'ny programa CAD (famolavolana fanampiana amin'ny solosaina) sy ny programa CAM (famokarana fanampiana amin'ny solosaina). Afaka mahita ny fomba tsara indrindra hamokarana kalitao avo lenta hatrany izy ireoSombiny nopetahan'ny CNC ary singa ho an'ny mpanjifa.
Miaraka amin'ny fahaiza-manao matanjaka sy traikefa nanan-karena nandritra ny taona maro, afaka manome fanao ambony izahay nefa mora vidy Serivisy fanodinana CNC ao anatin'izany ny axis 3 Fikosoham-bary ivon-toeran-5 axis Fikosoham-bary ivon-toerana ho an'ny famokarana haingam-pandeha CNC, prototyping haingana ary famaritana Fikosoham-baryary mihodina. Ny vokatra avo lenta haingana an'ny fikosoham-bary dia tafiditra amin'ny sehatry ny indostria mandeha ho azy, ny aerogenerator, ny milina fanodinana fiara, ny milina fikosoham-bary, ny fitaovana fitsaboana, ny fitaovana laboratoara, ny milina ny jiro, sns.
Ouzhan Precision CNC Milling capability sy endri-javatra:
- 15 taona niainana sy fahalalana ao Serivisy fanodinana milina CNC, Ouzhan dia manome OEM / ODM amin'ny ankapobeny Serivisy fanodinana CNC sy ireo vokatra mifandraika amin'izany, anisan'izany ny fikosoham-bary, ny fikosoham-bary, ny plastika, sns.
- Tohano ny famokarana andiany ambany, antonony hatramin'ny avo.
- Fanamboarana prototyping haingana sy fampiasana farany.
- Fahamarinana avo lenta, famokarana haingam-pandeha ary fahamendrehana avo lenta.
- Be dia be ny fitaovana vy sy plastika tsy voatery.
- Famaranana ilaina ary fandeferana henjana no misy.
- Maherin'ny 20 andiany avo lenta Fikosoham-bary milina ao Ouzhan.
3-axis milling centre
Grinder tsy misy foibe
Masinina fanodinana Keyway
Foibe fanamarihana laser
Maninona no mifidy Ouzhan CNC Milling Services
Ny fitaovana famokarana fototra dia nohafarana avy any Suisse sy Japon, izay afaka manome ny mpanjifa haingam-pandeha (± 0.01mm) sy mora vidy Fikosoham-bary vidin-javatra.
2.Mahafaha-manao fanamboarana CNC
Ankoatry ny fikosoham-bary, dia manokanay manokana ny fihodina, ny fanodinana, ny fandavahana, Serivisy fanodinana sy fikosohana CNC, mba hahafahanao mahazo safidy maro karazana Faritra vita amin'ny masinina avy amin'ny ekipa atokisantsika.
Manana injeniera 10 ao amin'ny ivon'ny R&D izahay, dokotera na profesora avy ao amin'ny University of Science and Technology of China avokoa izy rehetra. Azontsika atao ny manolotra ny endrika matihanina amin'ny endrika CNC sy ny injenieran'ny CNC.
Manana mpiasa sy fitaovana fampiasa amin'ny kalitao matihanina izahay, araka ny fenitra iraisam-pirenena momba ny vokatra hozahanay, ary mamoaka tatitra momba ny fitsapana amin'ny antsipiriany ho an'ny mpanjifa. Ny masinina amin'ny milina CNC.
Misy habe sy endriny namboarina. Tongasoa eto mba hizara ny sary 2D na 3D an'ny anao Ny masinina amin'ny milina CNC miaraka amintsika, andao hiara-hiasa mba hamorona kokoa ny fiainana.
Inona ny serivisy fanodinana CNC & Ahoana ny fiasan'ny CNC Milling
Fikosoham-bary dia dingana famokarana esorina izay manala haingana ny fitaovana avy amin'ny vy na plastika mba hamokarana ampahany voafaritra tsara mifandefitra.
Fikosoham-barydia mifanaraka tsara indrindra ho toy ny dingana faharoa na famaranana ho an'ny workpiece efa milina, manome ny famaritana na famokarana ny endri-javatra ny ampahany, toy ny lavaka, slots ary kofehy. Na izany aza, ny fizotrany dia ampiasaina ihany koa amin'ny famolavolana tahiry tahiry iray hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Amin'ireo tranga roa ireo dia manala tsikelikely ireo fitaovana ny endrika fikosoham-bary mba hamoronana endrika sy endrika tadiavina amin'ilay ampahany. Voalohany, manapaka ampahany kely — izany hoe chips — amin'ilay fitaovana ilay fitaovana mba hamoronana endrika sy endrika eo ho eo. Avy eo, ny sangan'asa dia miatrika ny fizotran'ny fikosoham-bary amin'ny tena marina avo lenta kokoa ary miaraka amin'ny fametrahana mazava tsara kokoa hamitana ilay ampahany amin'ireo endriny sy mombamomba azy. Matetika, ny ampahany vita dia mitaky fandefasana milina marobe mba hahatratrarana ny tena marina sy ny fandeferana. Ho an'ny faritra sarotra geometrika kokoa, ny fametrahana milina maromaro dia mety takiana mba hamenoana ny fizotran'ny famoronana.
Fitaovana fanodinana CNC - Fitaovana ampiasaina amin'ny fikolokoloana CNC
Fitaovana azo ampiasaina amin'ny fikolokoloana CNC
Haja malefaka, firaka ary fitaovana
Vy malefaka 1018
Varahina C360 Varahina C360
Vy malefaka 1045
Vy malefaka A36
Firaka vy 4140
Titanium Kilasy 1
Firaka vy 4340
Titanium Kilasy 2
Fitaovana vy O1
Fitaovana vy A2
Fitaovana vy A3
Manezioma AZ31B Manezioma AZ31B
Fitaovana vy D2
Fitaovana vy S7
Fitaovana vy H13
Fampiharana momba ny serivisy sy ny ampahany amin'ny fikosoham-bary
Famaranana ny famoronan'i Ouzhan CNC
Ity misy safidy betsaka amin'ny serivisy famaranana vy eo amin'ny safidinao ho an'ny ampahany mihodina amin'ny milina cnc mba hanatsarana ny fisehoan'ny faritra, ny malama, ny fanoherana ny harafesina ary ny toetra hafa: